कु’लमान नै कि’न चाहन्छन् आ’म मानिस ?,,, आफ्नो बिचार राख्दै सेय’र गरौ। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कु’लमान नै कि’न चाहन्छन् आ’म मानिस ?,,, आफ्नो बिचार राख्दै सेय’र गरौ।
काठमाडौं । आम जनता कुलमान घिसिङप्रति कति आशक्त छन् भन्ने उदाहरण एकाएक दोस्रो कार्यकालमा सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रसंगलाई लिएर भा’इरल भएको ब’धाईबाट पुष्टि हुन्छ । मंगलबार एकाएक सा’माजिक सञ्जालमा कुलमान घिसिङलाई बधाईको ओइरो आयो तर कुलमानको पुनर्नियूक्तिको प्रसंगनै झु’ट थियो ।
मन्त्रिपरिषदले कुल’मानलाई दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको भन्दै उत्साहका साथ बधाइ दिन थाले मानिस । यद्यपि, यस विषयमा उर्जामन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यस्तो कुनै प्र’स्ताव लगिएको थिएन । खैर जेहोस तर उनी आम मानिसको मन मष्तिस्कमा बसिसकेका छन् भन्ने गतिलो उ’दाहरण हो बधाइ दिन गरिएको ह’तारो ।
सामाजिक स’ञ्जालमा देखिएको कुलमानप्रतिको आशक्ति
कलाकार सिताराम क’ट्टेल(धुर्मुस)ले पनि सामाजिक सञ्जालमा म’न्त्रिपरिषदको नि’र्णय स्वागतयोग्य भन्दै बधाइ दि’न भ्याए । य’ता डा.राम उ’प्रेतीले पनि राम्रो काम गर्दा जनताले माया गर्छन् भन्दै घिसिङलाई बधाई दिए । सामाजिक सञ्जालमै प्र’काश बस्नेतले पनि कुलमानलाई अल्छी भन्दै ४ बर्षमा एक दिन पनि बत्ति काट्न जागर नगरेको भनेर लेखे ।
फेरि पनि यस्तै अल्छी गर्नु भन्दै उनले बधाई दिए । यी त सामाजिक सञ्जालका प्र’तिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । कतिपयले गलत समाचार नै भएपनि सबैले बधाइ दिएपछि सरकारलाई एक प्रकारको द’बाब म’हसुस हुने वि’श्लेषण गर्न थालेका छन् । केही व्यक्तिले त फोटोको फ्रेम नै बनाएर कुलमानको फोटो स’हित ति’मी छौ र त देश उज्यालो छ भन्दै प्रोफाइल बनाइरहेका छन् । कुलमान प्रतिको आममानिसको आशक्त सा’माजिक सञ्जालमा अहिले छ’रपष्ट देख्न स’किन्छ
कुलमान कसरी आम मानिसको म’न म’तिष्कमा बस्न सफल भए ? चर्चा य’सैबाट गरौं
अबको १९ दिनपछि (भाद्र २९) घिसिङको कार्यकाल सकिँदैछ । उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा अधिकांश उनको पुरागमन हुनुपर्ने माग गर्छन् । तर केही जमात उनी आफै लोकप्रिय भएकाले उनले अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अवसर पाउनेछन् । यसैमा म’रिमेट्नु पर्ने का’रण नरहेको बताउँछन् । तर लोडसेडिङको प्रत्यक्ष मार खेपेका आम मानिस त्यही लोडसेडिङदेखि त्र’सित छन् ‘कतै कुलमान बाहिरिएपछि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएर फेरि सास्ती पा’उनुपर्ने त होइन ?’
कुनै सयम यस्तो पनि थि’यो हरेक दिन लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक हुन्थ्यो, त्यो पनि १८÷१८ घण्टा । साँझ पर्यो कि सर्वसाधारण वैकल्पिक उज्यालोको जोहो गर्न हतारिन्थे । लोडसेडिङकै कारण वि’द्यार्थीले रातको समयमा पढ्न पा’उँदैनथे भने उद्योगधन्दाहरु पूर्ण क्ष’मतामा चल्न पाउँदैनथे ।
जतिबेला ब’त्ति आउनेभन्दा जाने समय धेरै थियो अर्थात लोडसेडिङले अन्धकार बनेको थियो । दैनिक १८ घण्टासम्म लो’डसेडिङ भोगेका नेपालीलाई कुलमानको आगमनपछि लोडसेडिङ हुने स’मस्याबाट मुक्ति मिलेको छ । अध्याँरो नेपाललाई उ’ज्यालो छरेर हरेक दिन लोडसेडिङको तालिका हेर्न पर्ने अ’वस्थाबाट आम सर्वसाधारणले मुक्ति पाए । घिसिङको फेक टिव्टर अकाउन्टमा मंगलबार पु’नःनियुक्तिको वि’षय आएपछि समाचार भा’इरल बनेको थियो ।
Previous कुलमानलाई सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति दिएको होला सरकारले हैन : मन्त्रि खतिवडा,के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
Next हाकिमले दिने मा.नसिक ट,र्चर र आ,र्थिक शो,षणका कारण ७,७०० प्रहरीले दिए राजीनामा
49 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता
16 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता